कनेक्टिकट कसरी लेख्ने? कनेक्टिकट भनेको के हो यसको मतलब Tdk - How Writing.Info
कसरी कनेक्टिकट लेख्न
कनेक्टिकट सही हिज्जे
यो शब्द माथिको रूपमा प्रयोग भएको छ। तलको मुद्दा यहाँ बिर्सनु हुँदैन। यो बिर्सनु हुँदैन कि वाक्यमा यी शब्दहरू व्यञ्जन नरम वा व्यञ्जनवर्ण (p-ç-tk) को लागी प्रत्यय लगाएर परिवर्तन हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, जब प्रत्यय पुस्तक मा जोडिएको छ - एक नरम एक पुस्तकको सट्टा एक पुस्तक को रूप मा हुन्छ। वा, व्यञ्जनको समानता बुकसेलरको रूपमा हुन सक्दछ जब पुस्तिका प्रत्यय थपिएको छ। तपाईं कसरी यस्तै विषयहरूको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, लेखन स्वतन्त्रता हो, लेख्दा सावधान रहनुहोस्।
शब्दहरूमा सहायक कार्यहरूको हिज्जे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सहायक मनोरन्जनको प्रयोग गर्दा, यदि पहिलो शब्दमा ड्रप वा व्युत्पन्न हुँदैन भने, यी शब्दहरू छुट्टै लेख्नुपर्दछ, मिल्दैन। उदाहरण को लागी, अवलोकन गर्न, अवस्थित गर्न, त्यसैले हामीले हेर्नु पर्छ कि शब्दहरूको अर्थ के हो र ती गिरिरहेका छन् वा हिज्जे मार्गनिर्देशनहरूबाट आएका छन्। हाम्रो साइटले तपाईंलाई लेखन मार्गनिर्देशनको रूपमा अद्यावधिक डाटा प्रदान गर्दछ।
कनेक्टिकटका अर्थ के हो?
कनेक्टिकट कसरी लेख्ने?
कनेक्टिकट हिज्जे मार्गदर्शन